သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် | Worldwide Church of God Switzerland | Worldwide Church of God ဆွစ်ဇာလန် - Worldwide Church of God Switzerland
ဆောင်းပါး > သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် > သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်
သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်တော်များ ရှိပြီး၊ ဘုရားသခင်နှင့် ညီမျှပြီး၊ ဘုရားသခင်သာလျှင် လုပ်ဆောင်သောအရာများကို လုပ်ဆောင်သည်။ ဘုရားသခင်ကဲ့သို့ပင်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သန့်ရှင်းသည်- သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်သောကြောင့် ကျိန်ဆဲခြင်းမှာ အပြစ်ရှိသကဲ့သို့ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်သည် (ဟေဗြဲ၊ 10,29) သန့်​ရှင်း​သော​ဝိ​ညာဉ်​တော်​ကို ပုတ်​ခတ်​ကဲ့​ရဲ့​ခြင်း​သည် ခွင့်​မ​လွှတ်​နိုင်​သော​အ​ပြစ်​ဖြစ်​သည် (မဿဲ ၁၊2,32) ဆိုလိုသည်မှာ ဝိဉာဉ်သည် မွေးရာပါ သန့်ရှင်းပြီး ဗိမာန်တော်ကဲ့သို့ပင် သန့်ရှင်းခြင်း မရှိကြောင်း ဆိုလိုသည်။
ဘုရားသခင်ကဲ့သို့ပင်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ထာဝရ (ဟေဗြဲ 9,14) ဘုရားသခင်ကဲ့သို့ပင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် နေရာတိုင်း၌ရှိ၏ (ဆာလံ ၁၃9,7စာ-၉)။ ဘုရားသခင်ကဲ့သို့ပင်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သဗ္ဗညုတ(1. ကောရိန္သု 2,10စာ-၁၁; ယော ၁4,26) သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဖန်ဆင်းသည် (ယောဘ ၃3,4; ဆာလံ ၁၀4,30) နှင့် အံ့ဖွယ်ရာများကို ဖန်တီးသည် ( မဿဲ ၁2,28; ရောမ ၁5,18-19) ဘုရားသခင်၏အမှုတော်ကို အထောက်အကူပြုသည်။ ကျမ်းပိုဒ်များစွာသည် ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အား အညီအမျှ ဘုရားဖြစ်ခြင်းဟု အမည်ပေးကြသည်။ ဝိညာဉ်တော်ဆုကျေးဇူးများအကြောင်း ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုတွင် ပေါလုသည် ဝိညာဉ်တော်၊ သခင်နှင့် ဘုရားသခင်၏ အပြိုင်တည်ဆောက်မှုများကို ရည်ညွှန်းသည် (1. ကောရိန္သု ၁2,4စာ-၆)။ သုံးပွင့်ဆိုင်ဆုတောင်းချက်ဖြင့် သူ၏စာကို အဆုံးသတ်သည်။2. ကောရိန္သု ၁3,14) ပေတရုသည် အခြားသုံးပွင့်ဆိုင်ပုံစံဖြင့် စာတစ်စောင်ကို အစပြုသည် (1. ဓာတ်ဆီ 1,2) ဤဥပမာများသည် သုံးပါးတစ်ဆူတစ်ဆူတည်းဖြစ်ခြင်း၏ အထောက်အထားမဟုတ်သော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် ဤအယူအဆကို ထောက်ခံပါသည်။
ဗတ္တိဇံဖော်မြူလာသည် ထိုသို့သောစည်းလုံးမှု၏နိမိတ်လက္ခဏာကို အားဖြည့်ပေးသည်– “ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌ နှစ်ခြင်းပေး” (မဿဲ ၂၈း၁၉)။ ၎င်းတို့သည် တစ်ဆူတည်းဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ပြသော နာမတစ်ခုရှိပြီး သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် တစ်စုံတစ်ခုကို ပြုလုပ်သောအခါတွင် ဘုရားသခင်က ထိုသို့ပြုသည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် စကားပြောသောအခါ၊ ဘုရားသခင်သည် စကားပြောသည်။ အာနနိသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကို လိမ်လည်လျှင် ဘုရားသခင်ကို လိမ်ညာခဲ့သည် (တ ၅း၃-၄)။ အာနနိသည် ဘုရားသခင်ကို ကိုယ်စားပြုသူအား လိမ်ညာခြင်းမဟုတ်၊ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်အား လိမ်ညာခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပေတရုဆိုသည်။
ကျမ်းပိုဒ်တစ်ခုတွင် ရှင်ပေါလုက ခရစ်ယာန်များသည် ဘုရားသခင်၏ ဗိမာန်တော်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုထားသည်။1. ကောရိန္သု 3,16နောက်တချက်တွင်၊ ငါတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ ဗိမာန်ဖြစ်သည်ဟု ဆို၏။1. ကောရိန္သု 6,19) ကျွန်ုပ်တို့သည် နတ်ဗြဟ္မာတစ်ပါးကို ကိုးကွယ်ရန် ဗိမာန်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအာဏာမဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ဗိမာန်ဖြစ်ကြောင်း ပေါလုရေးသားသောအခါ၊ သူသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်ကို ဆိုလိုသည်။
သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်နှင့်ဘုရားသခင်အတူတူဖြစ်သည်။ “ထာဝရဘုရားကို ဝတ်ပြုလျက် အစာရှောင်ကြစဉ်တွင်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က၊ ဗာနဗနှင့် ရှောလုတို့ကို ငါခေါ်ဝေါ်သောအမှု၌ ငါ့ကို ပိုင်းခြားလော့ဟု သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က မိန့်တော်မူသည် (တမန်၊ ၁။3,2)။ ဤတွင်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ဘုရားသခင်နည်းတူကိုယ်ပိုင်နာမ်စားများကိုအသုံးပြုသည်။ ထိုနည်းတူ၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က၊ “ငါသည် အမျက်ထွက်၍ ကျိန်ဆိုသည်ကား၊ သင်သည် ငါ၏ချမ်းသာရာသို့ မရောက်ရ” (ဟေဗြဲ၊ 3,7-11) ။ သို့သော် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဘုရားသခင်အတွက် အခြားအမည်တစ်ခုမျှသာ မဟုတ်ပါ။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ၌ပြသခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်း ခမည်းတော်နှင့်သားတော်နှင့် အမှီအခိုကင်းသည် (မဿဲ၊ 3,16စာ-၁၇)။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာတွင်ဘုရားသခင်၏အမှုတော်ကိုလုပ်ဆောင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် မွေးဖွားခြင်းဖြစ်သည် (ယော ၁း၁၂)၊ သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်မှ မွေးဖွားခြင်းနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည် (ယောဟန်၊ 3,5) သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အထဲ၌ ဘုရားသခင်နေထိုင်သည့် နည်းလမ်းဖြစ်သည် (ဧဖက် ၂း၂၂၊ 1. ဂျိုဟန် 3,24; 4,13) သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အထဲ၌ တည်ရှိသည် (ရောမ 8,11; 1. ကောရိန္သု 3,16) - ဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသောကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိတော်မူသည်ဟုလည်း ဆိုနိုင်ပါသည်။
ဝိညာဉ်အသက်ရှင်သည် (ရောမ 8,11; 1. ကောရိန္သု 3,16)
ဝိညာဉ်တော်သည် စကားပြောသည် (တ 8,29; 10,19;11,12; 21,11; 1. တိမောသေ 4,1; ဟီး 3,7)
ဝိညာဉ်တော်သည် တစ်ခါတစ်ရံ ကိုယ်ပိုင်နာမ်စား “ငါ” ကို အသုံးပြုသည် (တ 10,20;13,2)
ဝိညာဉ်တော်သည် စကားပြောဆိုနိုင်သည်၊ သွေးဆောင်မှု၊ ညည်းတွား၊ ကဲ့ရဲ့၊ နှောင့်ယှက်နိုင်သည် (တမန်တော်၊ 5,3; 9; ဧဖက် 4,30; ဟီး 10,29; မဿဲ ၂2,31)
ဝိညာဉ်တော်သည် လမ်းပြ၊ ဖြန်ဖြေပေးသည်၊ ခေါ်သည်၊ ညွှန်ကြားသည် (ရောမ 8,14; ၂၆; တမန်တော် ၁3,2;၂၀.၂၈)၊
ရောမ 8,27 စိတ်၏ဦးခေါင်းကိုပြော၏။ ဝိညာဉ်တော်သည် ဆုံးဖြတ်ချက်များချသည် - သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည် (တမန်တော် ၁5,28) စိတ်သည် သိပြီး အကျင့် (1. ကောရိန္သု 2,11; 12,11) သခင်ယေရှုသည် ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာ၊ အတိုင်ပင်ခံ သို့မဟုတ် ခုခံကာကွယ်သူဟု ဘာသာပြန်ဆိုထားသော သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် Paraclete ဟုခေါ်သည်။
“ထို့ပြင် ငါသည် ခမည်းတော်အား တောင်းလျှောက်လိုသဖြင့်၊ သူသည် သင်တို့နှင့်အတူ ထာဝစဉ်ရှိစေမည့် နောက်ထပ်နှစ်သိမ့်စေသောအရှင်ကို ပေးတော်မူမည်၊ လောကီသားတို့သည် သူ့ကိုမမြင်၊ မသိသောကြောင့် သမ္မာတရား၏ဝိညာဉ်ကို မခံယူနိုင်ပေ။ သင်​တို့​နှင့်​အ​တူ​ရှိ​၍ သင်​တို့​အ​ထဲ​၌​ရှိ​သ​ဖြင့် သူ​ကို​သင်​တို့​သိ​ကြ​လော့” (ယော၊ ၁4,16-17).
တပည့်တွေရဲ့ ပထမဆုံး အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ ယေရှုပဲ။ သွန်သင်ခြင်း၊ သက်သေခံခြင်း၊ ပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်း၊ လမ်းပြခြင်း၊ သမ္မာတရားကို ဖော်ပြသည့်အတိုင်း သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် (ယောဟန် ၁ ကော၊4,26; 15,26; 16,8; ၁၃-၁၄)။ ဒါတွေအားလုံးဟာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အခန်းကဏ္ဍတွေပါ။ John သည် ကြားနေပုံစံကို အသုံးပြုရန် မလိုအပ်သောကြောင့် ဂရိစကားလုံး Parakletos ၏ ယောက်ျားပုံစံကို အသုံးပြုသည်။ Johannes တွင် ၁6,14 Geist ဟူသော ကြားနေစကားလုံးကို အသုံးပြုပြီးနောက် ယောက်ျားလေးကိုယ်ရေးကိုယ်တာနာမ်စား "he" ကိုပင် အသုံးပြုသည်။ ကြားနေကိုယ်ရေးကိုယ်တာနာမ်စားသို့ ပြောင်းရန် ပိုမိုလွယ်ကူမည်ဖြစ်သော်လည်း Johannes က မလုပ်ဆောင်ပါ။ စိတ်ကို "သူ" ဖြင့် ရှုသည်။ သို့သော် သဒ္ဒါသည် အတော်လေး အရေးမကြီးပါ။ သို့ရာတွင်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ ကိုယ်ပိုင်အရည်အသွေးများ ရှိရန် အရေးကြီးသည်။ သူသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစွမ်းအားမဟုတ်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌နေထိုင်သော အသိဉာဏ်ရှိပြီး မြင့်မြတ်သောအကူအညီပေးသူဖြစ်သည်။
သမ္မာကျမ်းစာတွင် “သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်” ဟူသော အပိုင်းမပါဝင်ပါ။ သမ္မာကျမ်းစာကျမ်းစာများတွင် သူ့အားဖော်ပြထားသောအခါ ဤနေရာတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ထံမှ အနည်းငယ်သင်ယူပါ။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းက ကျွန်ုပ်တို့ကို အနည်းငယ်မျှသာ ပေးသည်။ နာမ်ဝိညာဉ်သည် အသက်ကို ဖန်ဆင်းခြင်း၌ ရှိ၏ (1. ကြွက် 1,2; အလုပ် ၃3,4;34,14) ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည် ဗေဇလေလကို တဲတော်တည်ဆောက်နိုင်မှုဖြင့် ပြည့်စေသည် (2. မောရှေ ၁1,3စာ-၅)။ မောရှေကို ဖြည့်ဆည်းပေးပြီး အသက်ကြီးသူ5များမှတဆင့် ကြွလာခဲ့သည်။4. ကြွက် 11,25) ရှံဆုန်သည် ခွန်အားနှင့် တိုက်လှန်နိုင်စွမ်းနှင့် ပြည့်စုံသကဲ့သို့၊5. မောရှေ ၁4,9; တရားသူကြီး [အာကာသ]]6,34; 14,6) ဘု​ရား​သ​ခင်​၏​ဝိ​ညာဉ်​တော်​ကို ရှော​လု​အား​ပေး​တော်​မူ​ပြီး​နောက် တစ်​ဖန်​ပြန်​ယူ​သွား​သည်။1. ဆမ် 10,6; 16,14) ဝိညာဉ်တော်သည် ဒါဝိဒ်ကို ဗိမာန်တော်အတွက် အစီအစဥ်များ ပေးခဲ့သည်။1. Chr ၁8,12) ဝိညာဉ်တော်သည် ပရောဖက်များကို ပြောဆိုရန် မှုတ်သွင်းခဲ့သည်။4. မောရှေ ၁4,2; 2. ထိုင် ၂3,2; 1. Chr ၁2,18;2. Chr ၁5,1; ၂၀.၁၄; ယေဇကျေလ 11,5; ဇာခရိ 7,12;2. ဓာတ်ဆီ 1,21).
ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်လည်း၊ ဧလိရှဗက်၊ ဇာခရိနှင့် ရှိမောင်တို့ကဲ့သို့ လူတို့ကို စကားပြောရန် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။ (လုကာ၊ 1,41; 67; 2,25စာ-၃၂)။ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည် မွေးကတည်းက သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် ပြည့်ဝခဲ့သည် (လု 1,15) သူ၏အရေးကြီးဆုံးအလုပ်မှာ လူများကို ရေသာမက သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် မီးဖြင့် နှစ်ခြင်းပေးမည့် ယေရှုခရစ်ကြွလာတော်မူခြင်းကို ကြေငြာခြင်းဖြစ်သည် (လုကာ၊ 3,16).
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် အလွန်တည်ရှိပြီး ယေရှု၏အသက်တာတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဝိညာဉ်တော်သည် သူ၏သန္ဓေတည်ခြင်းကို လှုံ့ဆော်ပေးသည် (မဿဲ 1,20ဗတ္တိဇံ​ခံ​ပြီး​နောက် သူ့​အပေါ်​မှာ အိပ်​ပါ (မဿဲ 3,16) သူ့ကို ကန္တာရသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့သည် (လု4,1) သတင်းကောင်း ဟောပြောနိုင်အောင် ကူညီပေးခဲ့တယ်။ (လု 4,18) ယေရှုသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အကူအညီဖြင့် နတ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ခဲ့သည်။2,28) သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် လူသားတို့၏အပြစ်အတွက် ယဇ်အဖြစ် မိမိကိုယ်ကို ပူဇော်ခဲ့သည် (ဟေဗြဲ)9,14) တူညီသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူသည် (ရောမ 8,11).
တပည့်တော်များ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရသည့်အချိန်များတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဟောပြောမည်ဟု ယေရှုသွန်သင်ခဲ့သည် (မဿဲ 10,19စာ-၂၀)။ ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌ ယေရှု၏နောက်လိုက်များအား ဗတ္တိဇံပေးရန် သူတို့ကိုပြောခဲ့သည်။8,19) ထို့အပြင် ဘုရားသခင်သည် လူအပေါင်းတို့အား သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အား ပေးသနားတော်မူကြောင်းကိုလည်း တောင်းလျှောက်ကြသည် (လု 11,13) သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အကြောင်း ယေရှုပြောခဲ့သော အရေးကြီးဆုံးအရာအချို့မှာ ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင်ဖြစ်သည်။ ပထမလူများသည် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်မှ မွေးဖွားလာရမည် (ယော 3,5) လူတို့သည် ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ ပြုပြင်မှုတစ်ခု လိုအပ်ပြီး ၎င်းသည် ၎င်းတို့ထံမှမဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်ထံမှ လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ်တော်သည် မမြင်ရသောအခါ၌ပင် ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ၌ ခြားနားမှုကို ဖြစ်စေသည် (း၈)။
ယေရှုလည်းသင်ကြားပေးခဲ့သည် - “ရေငတ်ရင် ငါ့ဆီလာပြီး သောက်ပါ။ ငါ့ကိုယုံကြည်သောသူမည်သည်ကား၊ ကျမ်းစာလာသည်အတိုင်း၊ အသက်ရှင်သောရေမြစ်သည် မိမိခန္ဓာကိုယ်မှ စီးဆင်းလိမ့်မည်။ ယုံကြည်သောသူတို့သည် ခံရမည်ဟု ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ဝိညာဉ်မရှိသေး။ အကြောင်းမူကား၊ ယေရှုသည် ဘုန်းထင်ရှားခြင်းမရှိသေး။” (ယော 7,37-39) ။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်အတွင်းပိုင်းရေငတ်မှုကိုကျေနပ်စေသည်။ ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုသူဖန်တီးခဲ့သောဘုရားသခင်နှင့်ဆက်ဆံရေးရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေရှုထံသို့လာခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကိုဖြည့်ဆည်းသောသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ၀ ိညာဉ်တော်ကိုရရှိသည်။
ဂျိုဟန်ကပြောပါတယ် အကြောင်းမူကား၊ အကြောင်းမူကား၊ ယေရှုသည် ဘုန်းထင်ရှားခြင်း မရှိသေး” (း၃၉)၊. ဝိညာဉ်တော်သည် ယေရှု၏အသက်တာမတိုင်မီ ယောက်ျားမိန်းမအချို့ကို ပြည့်စေခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း မကြာမီ ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့တွင် အစွမ်းထက်သောနည်းလမ်းသစ်ဖြင့် ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ သခင်ဘုရား၏ နာမတော်ကို ပဌနာပြုသောသူအပေါင်းတို့အား ယခု ဝိညာဉ်တော် ပေးသနားတော်မူပြီ (တ 2,38စာ-၃၉)။ သမ္မာတရား၏ဝိညာဉ်တော်သည် သူတို့အထဲ၌နေထိုင်မည့်သူတို့အား ပေးဆောင်မည်ဟု ယေရှုကတိပြုခဲ့သည်။4,16စာ-၁၈)။ ဤသစ္စာတရားသည် သခင်ယေရှုသည် တပည့်တော်များထံသို့ ကြွလာတော်မူသည်နှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည် (း၁၈)၊ အကြောင်းမူကား၊ သူသည် ခရစ်တော်၏ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ပြီး ခမည်းတော်၏ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်သည်- ယေရှုနှင့်ခမည်းတော်ကစေလွှတ်တော်မူသော (ယော ၁၊5,26) ဝိညာဉ်တော်သည် သခင်ယေရှုကို လူတိုင်းလက်လှမ်းမီနိုင်စေရန်နှင့် သူ၏အမှုတော်ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ဖြစ်နိုင်စေပါသည်။4,26) ဝိညာဉ်တော်သည် ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမတိုင်မီ သူတို့နားမလည်နိုင်သည့်အရာများကို သွန်သင်ပေးခဲ့သည်။6,12-13) ။
ဝိညာဉ်တော်သည် ယေရှုအကြောင်းပြောသည် (ယော ၁5,26;16,24) သူသည် သူ့ကိုယ်သူ မကြော်ငြာဘဲ လူများကို ယေရှုခရစ်နှင့် ခမည်းတော်ထံ ပို့ဆောင်ပေးသည်။ ခမည်းတော်အလိုရှိတော်မူသည်အတိုင်း သူသည် မိမိအကြောင်းကို မပြောတတ်။ (ယော၊ ၁6,13) ဝိညာဉ်တော်သည် လူသန်းပေါင်းများစွာတွင် ပါဝင်လှုပ်ရှားနိုင်သောကြောင့် ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ မနေထိုင်တော့သည်မှာ ကောင်းပါတယ် (ယော ၁၊6,7) ဝိညာဉ်တော်သည် လောကီသားတို့အား ၎င်း၏အပြစ်နှင့် အပြစ်ကို ဖော်ပြပြီး တရားမျှတမှုနှင့် တရားမျှတမှုအတွက် လိုအပ်သည်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည် (း၈-၁၀)။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် လူတို့အား အပြစ်အတွက်ဖြေရှင်းချက်နှင့် ၎င်းတို့၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအရင်းအမြစ်အဖြစ် ယေရှုအားညွှန်ပြသည်။
ယေရှုသည် လူတို့ကို သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြင့် နှစ်ခြင်းပေးမည်ဟု နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်က ပြောခဲ့သည် (မာ 1,8) ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက် ပင်တေကုတ္တေပွဲ၌ ဝိညာဉ်တော်သည် တပည့်များအား ခွန်အားသစ်ပေးသောအခါ (တမန် ၂)။ ၎င်းတွင် အခြားလူမျိုးများ နားလည်သော ဘာသာစကားများ ပြောဆိုခြင်း အပါအဝင် (း၆) နှင့် အသင်းတော် ကြီးပြင်းလာသည်နှင့်အမျှ အလားတူ အံ့ဖွယ်အမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည် (တမန်တော်များ၏ တမန်တော်များ၊ 10,44-46; ၂၈.၃9,1(၆) သို့သော် ဤအံ့ဖွယ်အမှုများသည် ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းသို့သွားရာလမ်းကိုရှာဖွေသူတိုင်းအတွက် ဖြစ်သည်ကို မဖော်ပြထားပါ။
ရှင်ပေါလုက ယုံကြည်သူအားလုံးသည် တစ်ကိုယ်တည်း၊ အသင်းတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည် (1. ကောရိန္သု ၁2,13) ယုံကြည်သူတိုင်းအား သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ပေးသနားတော်မူခဲ့သည် (ဂလာတိ) 3,14) အံ့ဖွယ်အမှုများ ဖြစ်ခဲ့သည်ဖြစ်စေ မယုံကြည်သူတိုင်း သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ နှစ်ခြင်းခံကြသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ နှစ်ခြင်းခံကြောင်း သက်သေပြရန် သီးခြားအံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုကို ရှာဖွေမျှော်လင့်ရန် မလိုအပ်ပါ။
သမ္မာကျမ်းစာက ယုံကြည်သူအား သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ နှစ်ခြင်းခံရန် မလိုအပ်ပါ။ ယင်းအစား၊ ယုံကြည်သူတိုင်းသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် အမြဲပြည့်ဝနေရန် အားပေးခံရသည် (ဧဖက် 5,18) ဝိညာဉ်တော်၏ လမ်းညွှန်မှုကို တုံ့ပြန်နိုင်စေရန်။ ဤဆက်ဆံရေးသည် ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီး တစ်ခုတည်းသောဖြစ်ရပ်မဟုတ်ပါ။ အံ့ဖွယ်အမှုများကို ရှာဖွေမည့်အစား ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို ရှာသင့်ပြီး အံ့ဖွယ်အမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ရှိ၊ ပေါလုသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အံ့ဖွယ်အမှုများဖြင့် မဟုတ်ဘဲ လူတစ်ဦး၏အသက်တာတွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် ပြောင်းလဲခြင်းမှတစ်ဆင့် ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်ကို ဖော်ပြသည် - မျှော်လင့်ချက်၊ ချစ်ခြင်း၊ စိတ်ရှည်ခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ နားလည်ခြင်း၊ ဆင်းရဲဒုက္ခခံနိုင်ခြင်းနှင့် ရဲရင့်စွာဟောပြောခြင်း (ရောမ ၁၊5,13; 2. ကောရိန္သု ၁2,9; ဧဖက် 3,7; ၁၆-၁၈; ကောလောသဲမြို့ 1,11; ၂၈-၂၉; 2. တိမောသေ 1,7-၈)။ ဘုရားသခင်သည် လူတို့၏အသက်တာကို ပြောင်းလဲပေးသောကြောင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အံ့ဖွယ်အမှုများကို ကျွန်ုပ်တို့လည်း ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။တမန်တော်များ၏ တမန်တော်များက ဝိညာဉ်တော်သည် အသင်းတော်ကို ကြီးပွားအောင် ကူညီပေးကြောင်းပြသသည်။ ဝိညာဉ်တော်သည် လူတို့အား သခင်ယေရှုအကြောင်း မျှဝေ၍ သက်သေခံနိုင်စေခဲ့သည် (တမန်တော်များ၏ တမန်တော်များ 1,8) တပည့်တော်တို့ကို တရားဟောရန် အခွင့်ပေးတော်မူသည် (တ 4,8, 31; 6,10) သူသည် ဖိလိပ္ပုအား ညွှန်ကြားချက်ပေးခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် သူ့ကို ချီမြှောက်ခဲ့သည်။ ( တ 8,29; ၃၉)။ ဝိညာဉ်တော်သည် အသင်းတော်ကို အားပေးပြီး ခေါင်းဆောင်များကို တည်ထောင်ခဲ့သည် (တ 9,31; ၂၀.၂၈)။ ပေတရုနှင့် အန္တိအုတ်အသင်းတော်တို့ကို ဟောပြောခဲ့သည် (တ 10,19; 11,12; 13,2) မွတ်သိပ်ခြင်းဘေးကို ကြိုမြင်သောအခါ အာဂဗုတ်မြို့တွင် အလုပ်လုပ်ပြီး ပေါလုကို လွတ်မြောက်စေရန် ပို့ဆောင်ခဲ့သည် (တမန်တော်များ 11,28; 13,9စာ-၁၀)။ ပေါလုနှင့် ဗာနဗတို့ကို လမ်းပြစေတော်မူသည် (တမန် ၁3,4; 16,6(၇) ယေရုရှလင်မြို့၌ တမန်တော်များ၏စည်းဝေးပွဲကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်စေခဲ့သည် (တမန် ၁။5,28) ပေါလုကို ယေရုရှလင်မြို့သို့ စေလွှတ်ပြီး သတိပေးခဲ့သည် (တ ၂၀း၂၂-၂၃၊ ၂။1,1၁)။ အသင်းတော်သည် ယုံကြည်သူများ၌ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ လုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် တည်ရှိပြီး ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ယနေ့ယုံကြည်သူများ၏အသက်တာတွင်ပါ ၀ င်သည်။
သူသည် ကျွန်ုပ်တို့အား နောင်တတရားဆီသို့ ဦးတည်စေပြီး ကျွန်ုပ်တို့အား အသက်သစ်ပေးသည် (ယော ၁6,8; 3,5-6)
သူသည် ကျွန်ုပ်တို့၌ နေထိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကို သွန်သင်ပေးကာ လမ်းညွှန်ပေးသည်။1. ကောရိန္သု 2,10စာ-၁၁; ယော ၁4,16-17,26; ရောမ 8,14)
သမ္မာကျမ်းစာတွင်၊ ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်၊ အခြားခရစ်ယာန်များမှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ကိုတွေ့ဆုံရန် သူသည် ဉာဏ်ပညာ၏ဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီး အရာများကို ရဲရင့်မှု၊ မေတ္တာနှင့် ချုပ်တည်းမှုဖြင့် ကြည့်ရှုရန် ကူညီပေးသည် (ဧ.1,17; 2. တိမောသေ 1,7)
ဝိညာဉ်တော်သည် အရေဖျားလှီးဖြတ်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းစေပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးကို ပြောင်းလဲစေသည် (ရောမ 2,29; ဧဖက် 1,14)
ဝိညာဉ်တော်သည် ငါတို့၌ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းအသီးကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ (ရော5,5; ဧဖက် 5,9; ဂလာတိ 5,22-23)
ဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အသင်းတော်တွင် နေရာပေးထားပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်ကြောင်း နားလည်စေပါသည်။1. ကောရိန္သု ၁2,13;ရောမ 8,14-16)
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို စိတ်ဝိညာဉ်ဖြင့် ကိုးကွယ်ရမည် (ဖိ3,3; 2. ကောရိန္သု 3,6; ရောမ 7,6; 8,4စာ-၅)။ ငါတို့သည် သူ့အား နှစ်သက်စေရန် ကြိုးစားကြသည် (ဂလာတိ) 6,8) သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား အသက်နှင့် ငြိမ်သက်ခြင်းကို ပေးသည် (ရောမ 8,6) ကိုယ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ခမည်းတော်ထံသို့ ဝင်ခွင့်ရှိသည်။ (ဧဖက် 2,18) ကျွန်ုပ်တို့၏အားနည်းချက်၌ ကူညီပေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ရပ်တည်တော်မူသည် (ရောမ 8,26-27) ။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးများကိုလည်း ပေးပါသည်။ သူသည် အသင်းတော်အတွက် ခေါင်းဆောင်များကို ပေးသည် (ဧဖက် 4,11) အသင်းတော်၌ အခြေခံ ကုသိုလ်တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ကြသူများ (ရောမ ၁2,6-၈) အထူးကျွမ်းကျင်မှု ရှိသူ (အထူးအလုပ်များ၊1. ကောရိန္သု ၁2,4စာ-၁၁)။ လက်ဆောင်တိုင်းကို လူတိုင်း မပေးဘူး (း၂၈-၃၀)။ လက်ဆောင်အားလုံးကို ဝိညာဉ်ရေးအရဖြစ်စေ မပေးသည်ဖြစ်စေ အသင်းတော်တစ်ခုလုံးအတွက် အသုံးပြုသင့်သည် (1. ကောရိန္သု ၁2,7; 14,12) လက်ဆောင်တိုင်းက အရေးကြီးတယ် (1. ကောရိန္သု ၁2,22စာ-၂၆)။ ယနေ့တိုင်အောင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝိညာဉ်တော်၏ အဦးသီးသော အသီးအနှံများကိုသာ ရရှိထားသော်လည်း အနာဂတ်အတွက် များစွာသောကတိတော်များ (ရောမ၊ 8,23; 2. ကောရိန္သု 1,22; 5,5; ဧဖက် 1,13-14) ။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာတွင် ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ပြုသမျှသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။ ထို့ကြောင့် ပေါလုသည် ကျွန်ုပ်တို့အား သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် အသက်ရှင်နေထိုင်ရန် တိုက်တွန်းထားသည်။ (ဂလာတိ၊ 5,25; ဧဖက် 4,30; 1. သက် 5,19) ထို့ကြောင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် မိန့်တော်မူသည်ကို နားထောင်ကြပါစို့။ အကြောင်းမူကား၊ သူပြောသောအခါ၊ ဘုရားသခင်သည် မိန့်တော်မူ၏။